Google ayaa joojin doonta urinta emaylladaada si ay kuu tusto xayeysiin | Wararka IPhone
Emailka Google wuxuu noqday midka ugu isticmaalka badan adduunka. La midoobiddeeda barnaamijyada iyo adeegyada kale ee Google ayaa ka dhigtay Gmail adeegga ugu caansan ee emaylka xisaabaadka shaqsiyeed iyo kuwa xirfadeedba.
Waxa badan oo isticmaaleyaashu aysan ogeyn waa in Google ay xaq u leedahay (oo waliba isticmaalkeeda) jaranjarada u dhexeysa emaylladaada si ay kuugu soo bandhigto xayeysiin shaqsiyeed sida ku xusan e-mayllada aad hesho. Howlahan muranka badan qaatay ee sanadaha qaata ee ay dacwado badani ka socdeen maxkamadaha, qaarkood wali lama xallin, waxay umuuqataa inay joogsanayso jiritaankeeda, ugu yaraan qayb ahaan.
Waxay ku jirtaa iyadoo la leeyahay marka sheygu xor yahay waxay ka dhigan tahay in qiimaha uu yahay asturnaantaada. Taasi waa tan ugu sarreysa ee lagu buuxiyo mid kasta oo ka mid ah adeegyada Google. Waxay siisaa alaab aad u wanaagsan oo la soo saaray oo bixisa xalal aad u xiiso badan oo loogu talagalay dadka isticmaala iyo waliba gebi ahaanba bilaash. Google Drive, Google Photos ama Gmail lafteeda ayaa cadeyn u ah tan. si kastaba ha noqotee, marka qofku si taxaddar leh u akhriyo shuruudaha adeegyadan, qofku wuxuu ogaanayaa inuu naftiisa ka iibinayo shaydaanka. Waxaanan ka hadlaynaa Google kiiskan maxaa yeelay waa mowduuca ina khuseeya laakiin isla sidaas ayaa loo odhan karaa adeeg kasta oo la mid ah sida Microsoft's Outlook laftiisa. Xitaa Apple oo leh iCloud waxay marin u leedahay xogta shakhsiga ah sida cinwaanada emaylka, inkasta oo xaaladdan aan loo isticmaalin xayeysiin.
Waxay u muuqataa in ugu yaraan tani ay wax ku hagaajinayso boostada Google, maxaa yeelay In kasta oo aysan caddeyn in Google uusan dib u eegi doonin emaylkeena Gmail ujeeddooyin kale, waxa ay shirkaddu ku wargelisay ayaa ah inay joojinayso sidaas si ay noo siiso xayeysiin shaqsiyeed. Sidoo kale macnaheedu maaha in xayeysiintu sii socon doonin in la arko, si fudud uma isticmaali doonto emaylkeena. Waa wax.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Google ayaa joojin doonta urinta emaylladaada si ay kuu tusto xayeysiin
Taasi waa sababta aanan u isticmaalin Gmail muddo ka badan sanad. iCloud ma noqon doonto mid wax ku ool ah raadinta iyo xawaaraha jawaabta laakiin waxaan doorbidaa sirtayda.
Toy Story wuxuu yimaadaa Apple Watch waana kuu soo bandhigeynaa